WikiLeaks Yozunza Mapato eMDC neZanu PF
Nyaya yemagwaro eWikiLeaks, ayo ari kuburitswa achisiya pamhene vanhu vakaita misangano muchivande nevamiriri veAmerica muZimbabwe, inonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika, ichashandiswa sechombo mukusawirirana kunonzi kuri mumapato eZanu PF ne MDC-T, ayo akabatwabatwa nenyaya iyi.
Mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vakaudza musangano weCentral Committee yebato ravo kuti pave kuitwa ongororo pamusoro pezvakaburitswa neWikiLeaks.
MuMDC yaVaTsvangirai munonzi mune kupumhanawo uroyi izvo zvinonzi zvakasiya padiki-diki kuti munyori anoona nezvehurongwa hwemusangano, VaNelson Chamisa, varovane nevaimbowe sachigaro wedunhu reHarare, VaMorgan Femai.
VaFemai vanonzi vakanga vati VaChamisa vataurire musangano weNational Executive Council neChitatu kuti chii chavakaudza vamiriri veAmerica, icho chakaburitswa muWikiLeaks.
VaChamisa, VaRoy Bennett naVaObert Gutu, vamwe venhengo dzeMDC-T dzakaburitswa neWikileaks.
Vakabatwa batwa mumagwaro aya muZanu PF vanosanganisira vatevedzeri vaVaMugabe, Amai Joice Mujuru, naVaJohn Nkomo, gurukota rezvevechidiki, VaSaviour Kasukuwere, pamwe nemumiriri weTsholotsho, VaJonathan Moyo, nevamwe.
VaMoyo vanonziwo vakaita misangano nemukuru weVirgin Group, VaRichard Branson vachitsvaga nzira dzekuti VaMugabe vangabviswa sei pakutonga.
WikiLeaks yakafumurawo vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika, avo vanonziwo vaienda nerweseri vachiita misangano iyi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vanoti mumapato ezvematongerwo enyika makuru maviri aya mune kusawirirana nechekare izvo zvichawedzerwa nezviri kupburitsa neWikiLeaks.
Imwewo nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mutasa, vanotsinhirawo mashoko aVaMangongera vachiti zvave kuitika mumapato maviri aya imviromviro dzemhanza, zvikuru zvichatevera.
Hurukuro naVaCharles Mangongera pamwe naVaCharles Mutasa